Nchịkọta Moschino Fall 2020 na-egosiputa ezigbo ụtọ Jeremy Scott Maka Eke Ọchịchị narị afọ nke 18 | Radị Rave
Nchịkọta Moschino Fall 2020 na-egosiputa ezigbo ụtọ Jeremy Scott Maka ejiji narị afọ nke 18
Naomi Campbell Na-eme Egwuregwu Agba Na-eji Egwuregwu Black Afọ Ejiri Egwuregwu Afrobeats Ejiri Eke Ọpụrụiche
IIhe a ghaghi abia dika ihe iju anya na ihe ngosi uzo ihe nlere nke Moschino Fall 2020 mara ezigbo mma na ebe mkpamkpa. Ihe ika ahu abughi nke ire ure. Ọ bụ ezie na nchịkọta Moschino na-enwekarị usoro mkpokọ na-atọ ụtọ, nke a nwere ike ịbụ isiokwu kachasị amasị anyị.
Ihe ngosi Moschino Fall 2020 mere n'abalị Tọzdee na Milan - mana site na isi okwu nke nchịkọta ahụ, ọ dị ka onye mmebe Jeremy kwuru emeela ka anya ya na Paris.
Na supermodels gụnyere Kaia Gerber na Bella Hadid, bụ ndị nke kewara n'uwe elu-ukwu nke nnukwu pannier-ukwu na nke na-agbagha ntutu-wigs, Jeremy Scott kwere ka mkpokọta Moschino Fall 2020 ya jikọọ nke ukwu Marie Antoinette.
Ihe ngosi a gosipụtara n’elu ntutu dị n’elu agba na agba dịgasị iche site na platinum na pastel pink ruo n’obi; renaissance ebi bustles, leced denim na velvet jacquard bara ọgaranya - ụdị nke iberibe ụmụ nwanyị ndị eze na-eyi na narị afọ nke 18. Ekike ndị a, n'ezie, agwakọrịrị n'etiti Moschino bịanyere aka n'akwụkwọ nkwado moto-jaketị na ngwa ndị dabara adaba.
Dịka eze nwanyị nke France, tupu mgbanwe nke French, ka amaara maka achịcha, Jeremy Scott gbanweere ya na akwa akwa achicha. E nwere nọmba nke na-acha uhie uhie na nke na-acha ọcha na-acha uhie uhie nke kwekọrọ na òkù ahụ, agba ọcha na-acha odo odo nwere ifuru oroma na atụmatụ ndị ọzọ na-echetara agbamakwụkwọ. Ekekọrịtara akpa dị ka achịcha na nri ndị ọzọ na-egbu egbu, akpa dị iche iche.
Ihe ngosi a bụ mmemme nke njikọta nke akụkọ ihe mere eme, ihe ndozi na ejiji nwere iberibe, nke ọtụtụ n'ime ha anaghị ere ahịa.
Lelee ụfọdụ ihe ngosipụta sitere na Moschino Fall 2020 collection…
Ebe E Si Nweta Foto: Akụkọ Akpụkpọ ụkwụ
Mgbụsị akwụkwọ ọdịda ejiji oge Jeremy kwuru Moschino ọdịda 2020 Mulan ejiji izu 2020
Akụkọ nke foto: Foto Na-enweghị atụ nke Burna Boy Na Ememe Onyinye BRIT 40th
Mkpokọta Moschino Pre-Fall 2020 na-akwụ agelọ Na New York City
NYFW SS20: Thedị Kachasị Ewuwu N’anya Site na Ndị Runway
Mayowa Nicholas + David Obennebo Walk For Moschino Ka Jeremy Scott Na-ahapụ Onye Okike Fantasy Run Wild Na Rome
Jeremy Scott na-akwụ nwa nzụkọ ma bụrụ ọkaibe Ode To Jackie O With the Moschino Fall 2018 Nchịkọta Na Milan Fashion Week 2018